ဘေဘီလေးကို သီဟိုဠ်စေ့ ကျွေးတဲ့အခါ - Page7of 85 - Hello Sayarwon
သီဟိုဠ်စေ့လို့ ပြောလိုက်ရင် အဆီများမယ်။ ဝိတ်တက်စေလိမ့်မယ်။ ကျန်းမာရေးကိုလည်း အထောက်အကူပြုမှာ မဟုတ်ပါဘူးလို့ ယူဆလိုက်ကြတာ များပါတယ်။ တကယ်ကတော့ သီဟိုဠ်စေ့က အယ်လ်မွန်စေ့၊ မြေပဲ၊ သစ်ကြားသီးတို့ထက် အဆီပါဝင်မှု နည်းပြီး အကျိုးပြု အဆီပါဝင်မှုတော့ များပါတယ်။
သီဟိုဠ်စေ့မှာပါဝင်တဲ့ အဆီရဲ့ ၄၇ ရာခိုင်နှုန်းက ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်ပါတယ်။ နှလုံးကိုလည်း ကျန်းမာစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါတင် မကသေးပါဘူး သီဟိုဠ်စေ့မှာ အရိုးနဲ့သွေးကြောတွေကို ကျန်းမာစေတဲ့ copper၊ မဂ္ဂနီဆီယမ်လိုမျိုး အာဟာရဓာတ်တွေလည်း ပါဝင်နေပါတယ်။ ဒီလို အာဟာရဓာတ် ကြွယ်ဝတဲ့ သီဟိုဠ်စေ့ကို ဘေဘီလေးကို ကျွေးလို့ ရမလားဆိုတော့……… ဒီဆောင်းပါးလးမှာ ပြောပြပေးမယ်နော်။
ဘေဘီလေးကို သီဟိုဠ်စေ့ ကျွေးလို့ရလား……….
ဘေဘီလေးကို သီဟိုဠ်စေ့ ကျွေးလို့ရပါတယ်။ ဘေဘီလေးက အသက် ၁၂ လပြည့်ပြီဆိုရင် သီဟိုဠ်စေ့ကို သေချာ ညက်အောင် ကြိတ်ပြီး ဘေဘီလေးကို ဆန်ပြုတ်၊ နို့ စတာတွေထဲကို ထည့်တိုက်ပေးလို့ ရပါပြီ။
သတိထားရမှာတစ်ခုကတော့ သီဟိုဠ်စေ့ အပါအဝင် အစေ့အဆန်တွေက ဓာတ်မတည့်မှု ဖြစ်စေနိုင်တာကြောင့် နည်းနည်းကနေ စကျွေးပေးဖို့ပါ။ ကလေးမှာ ဓာတ်မတည့်မှု လက္ခဏာတစ်ခုခု တွေ့ရမယ်ဆိုရင်တော့ ဆက်မကျွေးပါနဲ့။
သီဟိုဠ်စေ့မှာ ဘေဘီလေးတွေ ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် လိုအပ်တဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေ ပါဝင်နေပါတယ်။ သီဟိုဠ်စေ့မှာပါတဲ့ Riboflavin နဲ့ L-Carnitine တို့ဦးနှောက်ရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်နိုင်စေဖို့ ထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။
သီဟိုဠ်စေ့က ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေး ကောင်းစေသလို အသက်အရွယ်ရလာတဲ့အခါ အယ်လ်ဇိုင်းမား မဖြစ်စေဖို့လည်း ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
ဘေဘီလေးတွေကို ကျန်းမာစေဖို့ဆိုရင် ငယ်စဉ်ကတည်းက သွေးတွင်းကိုလက်စထရောကို သေချာ ထိန်းညှိထားဖို့ လိုပါမယ်။ ဒီတော့ သွေးတွင်းကိုလက်စထရောနဲ့ သွေးတွင်း သကြားဓာတ်ကို အကောင်းဆုံး ထိန်းညှိနိုင်စေဖို့ဆိုရင် သီဟိုဠ်စေ့ ကျွေးပေးလို့ ရပါတယ်။
သီဟိုဠ်စေ့က အမျှင်ဓာတ်ပါဝင်မှု မြင့်တာကြောင့် အစာကြေစေဖို့ ထောက်ကူပေးသလို အစာခြေစနစ်ကို ကောင်းမွန်စေပြီး ဝမ်းမှန်စေပါတယ်။ ဝမ်းချုပ်မှု ကင်းပြီး အစာခြေစနစ် ကျန်းမာစေချင်ရင် ကျွေးပေးသင့်တဲ့ အစားအစာ တစ်ခုပါ။
သီဟိုဠ်စေ့မှာ ဘေဘီလေးရဲ့ အရိုးနဲ့သွားတွေ သန်မာစေဖို့ လိုအပ်တဲ့ Phosphorus ပါဝင်နေပါတယ်။ ကြီးထွားနေတဲ့ ဘေဘီလေးရဲ့ အရိုးနဲ့ သွားတွေကိုတင် သန်မာစေတာ မဟုတ်ဘဲ ဘေဘီလေးကို ငယ်စဉ်ကာလမှာကတည်းက သီဟိုဠ်စေ့ ကျွေးပေးတာက အရွယ်ရလာတဲ့အခါ အရိုးပွရောဂါ မဖြစ်စေဖို့ အထိရောက်ဆုံး ကာကွယ်ပေးရာ ရောက်ပါတယ်။
ကိုယ်ခံအား ကောင်းစေတယ်။ သီဟိုဠ်စေ့မှာ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းနဲ့ Alkalinity တို့ ပါဝင်နေတာကြောင့် ကိုယ်တွင်းက အဆိပ်အတောက်တွေကို အထိရောက်ဆုံး ဖယ်ရှားပေးပြီး ဘေဘီလေးကို ကိုယ်ခံအားကောင်းစေဖို့ အကောင်းဆုံး ထောက်ပံ့ပေးမှာပါ။
သီဟိုဠ်စေ့ရဲ့ နောက်ထပ် ကျန်းမာရေး အာနိသင်တစ်ခုက Fatty acid ပါဝင်မှုကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်က နာကျင်ရောင်ရမ်းမှုတွေကို သက်သာစေနိုင်တာပါ။
What Is It and Will My Kid Eat It? Cashews https://dianakrice.com/what-is-it-and-will-my-kid-eat-it-cashews/ Accessed Date 11 November 2020
Cashews https://www.freshbaby.com/cashews/ Accessed Date 11 November 2020